ချစ်သူဘဝမှာ အတူနေဖို့ တခါမှ မတောင်းဆိုလို့ ရိုးသားသူ ဆိုပြီး ကြည်နူးခဲ့သမျှ ၊ မင်္ဂလာဦးညမှာ အသိနောက်ကျ နောင်တရခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီ
သတုိ့သားက လက်မထပ်ရသေးဘဲ အတူ မနေချင်ဘူး ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူက အဲ့လို လူစားမျိုး မဟုတ်ပဲ သမာရိုးကျ အေးအေးဆေးဆေး နေတတ်တဲ့သူ ဖြစ်တာကြောင့်ပါ လို့ပဲ ပြောခဲ့တာပါ။ ယနေ့ခေတ် ကာလမှာ သမီးရည်းစား အများစုက တစ်ယောက် အကြောင်း တစ်ယောက် သိနေအောင် လုပ်ထားပြီးတော့မှ လက်ထပ်ဖို့အထိ ဆုံးဖြတ်ကြတာ မျိုးပါ ။ တချို့တလေ ကျတော့လည်း ဘာသာရေး အရ ထုံးလမ်းစဉ်လာတွေ အရ လက်မထပ်ခင် အတူ မနေကြတာ မျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ် ။ ဒီစုံတွဲ ကတော့ ဘာသာရေး အယူလည်း မသည်းဘဲနဲ့ ရှေးရိုးအတိုင်း ရိုးရိုးသားသား ချစ်ခဲ့ကြပြီးမှ လက်ထပ်ဖို့ လုပ်ခဲ့တာပါ ။ အခုတော့ သတို့သမီးက သူ့ခင်ပွန်း …
Mobile Legends Acc နှစ်(၃၀)အထိ Ban ခံရလို့ ဝမ်းနည်းစွာ ငိုကြွေးနေတဲ့ကလေးငယ်
လူငယ်ထုအကြားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုကတော့ Mobile Legends ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းကို လူငယ်တွေ စွဲလန်းလွန်းလို့ တစ်ချို့သောနိုင်ငံတွေမှာတော့ နိုင်ငံအတွင်း ဆော့ကစားခွင့်ကိုတောင် ပိတ်ပင်မယ်လို့ ဆိုနေကြပါတယ်။ ဒီသတင်းဟာ Mobile Legends သမားတွေအတွက်တော့ စိုးရိမ်စရာ မကျေနပ်စရာပါ။ Facebook Facebook တစ်ရက်လောက် အBan ခံရရင်တောင်၊ နောက်မထိထိုင်မသာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ Gamer တွေဘဝမှာ တစ်ခါတလေ အကောင့်ကို ရာသက်ပန်နီးပါး Ban တာမျိုးတောင် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆိုရရင် ကစားသူဘက်က ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့အမှားမျိုး ကျူးလွန်ရင် နှစ်ပေါင်းချီပြီး ပိတ်ပင်ခံရတတ်ပါတယ်တဲ့။ အခုလည်း အဲဒီလိုအဖြစ်မျိုး ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်က ကလေးငယ်လေးဟာ သူရဲ့ Mobile Legends Account ကို နှစ်ပေါင်း (၃၀)အထိ Ban …
ပန်းရောင်လေးတွေနဲ့ Cutie လေးတွေဖြစ်နေတဲ့ စူပါဟီးရိုးတွေ
By Aung Aung on Thursday, May 2, 2019
မကြာသေးမီကမှ ရုံတင်ပြသသွားတဲ့ Anvengers End Game ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို တော်တော်များများ ကြည့်ပြီးသွားကြပြီထင်ပါတယ်။Mavel ရဲ့ Superheroes ရုပ်ရှင်တွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပရိသတ်တွေ အရူးအမူးအားပေးရတဲ့အရည်သွေးမြင့်ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ အဲဒီရုပ်ရှင်တွေထဲက ကာရိုက်တာတွေဟာလည်း ပရိသတ်တွေ လေးစားအားကျချစ်မြတ်နိုးပြီး စံထားရလောက်တဲ့အထိ ပရိသတ်တွေရဲ့ ဘဝကို စိုးမိုးထားနိုင်ခဲ့တာပါ။ အခုလတ်တလော Facebook ပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့လာနေတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေထဲမှာ ပရိသတ်တွေချစ်ရတဲ့ Superheroes တွေကို ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့မြင်တွေ့ရမှာပါ။ အဲဒါကတော့ စူပါဟီးရိုးတွေက ပန်းရောင်လေးတွေဖြစ်နေတာပါပဲ။ ပန်းရောင်လေးတွေဖြစ်ရုံမကပဲ အရမ်းကို ခရုတဲ့ Hello Kitty Theme လေးတွေဖြစ်နေတာကိုမြင်ရမှာပါ။ Captain America ဟာဆိုရင် ရင်ဘတ်မှာ Hello Kitty အရုပ်ကလေးနဲ့ ကလစ်လှလှလေးတပ်ထားပြီးအရမ်းကိုချစ်ဖို့ကောင်းနေတာမြင်ရမှာဖြစ်သလို Thor ရဲ့ ပန်းရောင်တွေလက်ဖြာနေတဲ့ တူကြီးက …
ကျွန်ုပ်သာ အစိုးရဆိုရင် မြစ်ဆုံကိစ္စကို ဒီလိုရှင်းမယ်
By Aung Aung on Thursday, April 25, 2019
ကျွန်ုပ်သာ လက်ရှိအစိုးရဖြစ်ခဲ့သော်အရင်အစိုးရက မြစ်ဆုံကို တရုတ်ရောင်း ကျုပ်က မြစ်ဆုံကို အမေရိကန် ရောင်းတရုတ်က သူတို့ပိုင်တယ် ငြင်း အမေရိကန်ကလဲ လက်ရှိအစိုးရနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ စာချုပ်ကြီး ထုတ်ပြမြစ်ဆုံအငြင်းပွားမှုဖြစ်တရုတ်ရော အမေရိကန်ရော အမှုဖြစ်လို့ မြန်မာပြည်တရားရုံးမှာ အမှုရင်ဆိုင်တရားသူကြီးက တပတ်တခါ ရုံးချိန်းခေါ်ထရမ့်ရော ရှီကျင်းပင်ရော တနှစ်ကို အခေါက်၄၀၀လောက် မြန်မာပြည်လာတရားရုံးက အမှုရင်ဆိုင်ဆဲဆိုပြီး မြစ်ဆုံမှာ ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်“အခင်းဖြစ်ပွားရာမြေ မည်သူမှ မကျူးကျော်ရ” လို့ ရေး. .မြန်မာတရားကြီးကြောင့် အမှုက တနှစ်လဲ မပြီး ၂နှစ်လဲ မပြီး . . ရုံးချိန်းတွေ နေ့တိုင်းခေါ်. . .ထရမ့်ရော . .ရှီကျင်းပင်ရော ခဏ ခဏမလာနိုင်လို့ မြန်မာပြည်မှာလာနေရှေ့ဖတ်စာရေးပေးရ၊ ပြာတာပေးရ . .ရှေ့နေပေးရ. .ဆွဲချပေးရ. .တရားသူကြီး ဂါရငွေက. .ကုန်ထရမ့်ကြီးက …
PUBG ဂိမ်းကျွမ်းကျင်စွာ ဆော့တတ်သူတွေက ဥာဏ်ပိုကောင်းဟုသိရ…
PUBG ဂိမ်းကျွမ်းကျင်စွာ ဆော့တတ်သူတွေက ဥာဏ်ပိုကောင်းဟုသိရ… PUBG ကျွမ်းကျင်စွာ ကစားနိုင်သူများဟာ အခြားသူများထက် ထိုးထွင်းဖြတ်ထိုးဥာဏ်ပိုကောင်းကြောင်း ဂိမ်းလေ့လာသူများမှ လက်ခံထားခဲ့ကြပါတယ်။ PUBG ဂိမ်းဟာ 2017 ဒီဇင်ဘာမှ စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိချိန်မှာတော့ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာ ဒီဂိမ်းကို ဆော့ကစားသူ သန်း ၂၀၀ ခန့်ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ PUBG ဂိမ်းကို မိုဘိုင်းဗားရှင်း၊ ကွန်ပြူတာဗားရှင်း စသဖြင့် ဗာရှင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆော့ကစားနိုင်အောင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ကစားသမားများ တဦးနဲ့တဦး လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရတာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သူက အနိုင်ရရှိတဲ့ ဂိမ်းအမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ ကျန်းမာရေး ဆက်နွယ်မှုကို လေ့လာနေသူများရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ PUBG ဂိမ်းကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဆော့ကစားနိုင်သူများဟာ ပုံမှန်သူတွေထက် စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနဲ့ ဖြတ်ထိုးဥာဏ် ပိုပြီးကောင်းလေ့ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။PUBG ကျွမ်းကျင်စွာ …
ရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးတွေအနေနဲ့ ထွက်ရှိပြီးခဲ့သမျှ နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေအားလုံးကို ရသတစ်မျိုးစီခံစားရင်း ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အပြည့်စုံဆုံးဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာတောင် ပရိသတ်တွေ သတိမထားမိလိုက်တဲ့ လွဲမှားမှုတွေ၊ မသိမသာလွဲချော်သွားတဲ့ အမှားတွေဆိုတာ တစ်ကားစီမှာ ရှိကြစမြဲပါပဲ။ ဇာတ်ညွှန်းကောင်းလွန်းလို့ သာ ဇာတ်ရှိန်တက်ပြီး ထိုအမှားတွေကို သတိမထားမိခဲ့ကြတာပါ။ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ သုံး၊လေးခါလောက်ပြန်ကြည့်ရင်တောင် သတိမထားမိနိုင်လောက်အောင် သိသိသာသာကြီးလွဲချော်နေခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကတော့ … Spider-Man Spiderman တစ်ယောက် ပင့်ကူစွမ်းအားတွေ စတင်ရရှိချိန်မှာ သူ့ အခန်းထဲ ပင့်ကူမျှင်တွေနဲ့ ဝုန်းဒိုင်းကြဲခဲ့တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းကို ပရိသတ်တွေ မှတ်မိကြဦးမှာပါ။ အဆိုပါဇာတ်ဝင်ခန်းမှာလည်း မီးအိမ်ကိုပါ ပင့်ကူမျှင်တွေနဲ့ ပစ်မိသွားခဲ့ပေမဲ့ ခဏလေးအတွင်းမှာပဲ မီးအိမ်က နဂိုနေရာမှာ အကောင်းအတိုင်းရှိနေတာကို တွေ့ ရပါတယ်။ Braveheart 13 ရာစုနှစ်အတောအတွင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ Braveheart ရုပ်ရှင်ထဲမှာလည်း Kilt(စကော့တလန်တောင်ပေါ်သား …
“အမျိုးသားတစ်ဦးမှ မြည်းမတစ်ကောင်ကို အကြိမ်ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံမှု ကျူးလွန်သောကြောင့် မြည်းမလေးကို လက်ထပ်ယူရန် ” ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူမှ တိုင်တန်း. .
By Aung Aung on Saturday, February 9, 2019
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာ မြည်းမတစ်ကောင်ကို လယ်သမားက လိင်ဆက်ဆံခဲ့တာကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသူ ပိုင်ရှင်က သူ့မြည်းမကို လက်ထပ်ယူရမယ် လို့ သက်ဆိုင်ရာကို တိုင်တန်းခဲ့ပါတယ်။ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ လိုင်မ်ပိုပိုပြည်နယ် မှာဖြစ်ခဲ့ကြောင်း Capricorn ဒေသတွင်း မီဒီယာက ဆိုပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မြည်းမတစ်ကောင်ကို ပိုင်ရှင်က လယ်သမားအား အဖက်ပေးထားရာက ခုလိုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ လယ်သမားက ငြင်းဆန်နေပေမယ့် ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကတော့ ”သူဟာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါတည်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အကြိမ်များစွာဆက်ဆံခဲ့တာပါ။ ဒါ့ကြောင့် တကယ်လက်ထပ်ယူသင့်ပါတယ်”လို့ ဒေသတာဝန်ရှိသူတွေကို ဆိုပါတယ်။ ဒေသတာဝန်ရှိသူတွေက နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပြေလည်အောင် လျော်ကြေးသဘောမျိုး လက်ခံဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့သော်လည်း မြည်းပိုင်ရှင်မှ လျော်ကြေး မယူနိုင်ကြောင်း . . လိင်ဆက်ဆံခြင်းခံခဲ့ရသော မြည်းမလေး၏ နစ်နာမှုကို ထောက်ထားသောအားဖြင့် ကျူးလွန်သူတရားခံ လယ်သမားမှ မြည်းမလေးကို တရားဝင် လက်ထပ်ယူ …
ကြည့်ရူသူ သန်းကျော်သွားတဲ့ ဆိုင်ကယ်စီးပြတဲ့ မျောက်ကလေး ကျွမ်းချက်ကတော့ 9+++
By Aung Aung on Wednesday, February 6, 2019
ကြည့်ရူသူ သန်းကျော်သွားတဲ့ ဆိုင်ကယ်စီးပြတဲ့ မျောက်ကလေး ကျွမ်းချက်ကတော့ 9+++ အရမ်းလိမ္မာတဲ့ မျောက်ကလေး Videoကြည့်ရန် .
Funny Knowledge Lifestyle News Uncategorized
လူကြီးတွေကို အတွေးရိုင်းဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ဂွတီးဂွကျပန်းချီလက်ရာများ
(Zawgyiဖြင့် ဖတ်ရန်) ကလေးဆိုတာ သိပ်ကို ဖြူစင်ရိုးသားပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေရဲ့ ဖန်တီးမှု၊ ကြိုးစားမှု၊ နေထိုင်စားသောက်မှုတွေဟာ သူတို့ရဲ့ လက်ရှိပင်ကိုယ်စိတ်အတိုင်း ပြုမူနေထိုင်ကြတာပါ။ အခု ဖော်ပြထားတဲ့ ကလေးပန်းချီလက်ရာလေးတွေကတော့ လူကြီးတွေအတွက် တစ်ချို့က အတွေးရိုင်းရိုင်းကို ဖြစ်စေမှာဖြစ်သလို၊ တစ်ချို့ကတော့ အတွေးတစ်ခု ပွားစရာ၊ တစ်ချို့က ရယ်စရာ ဖြစ်စေမှာပါ။ (၁) မီးပြတိုက် (၂) လက်ဆေးကြမယ်ဟေ့ (၃) မသေမရှင် ဖြစ်သွားမယ် (၄) Cook နဲ့ Cock စာလုံးချင်းမှားသွားတယ် … ပန်းချီနဲ့တော့ ကွက်တိပါဘဲ (၅) ရုပ်ချောချောလေး ဖန်တီးခဲ့လို့ ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် (၆) အထင်မမှားပါနဲ့ … ကတ်ကြေးပါတဲ့ (၇) F နဲ့စတဲ့စာလုံးဆိုတော့ … (၈) ခြင်္သေ့ပေါ်ကို …
Celebrity Funny Knowledge Lifestyle News Relationships Uncategorized
“နမ်းပါ ဆိုတာကို မနမ်း၊ ဘီယာချည့် ခွသောက်နေတဲ့ ချစ်သူကို စိတ်တိုပြီး ပညာပြလိုက်တဲ့ ကောင်မလေး”
By Aung Aung on Tuesday, October 23, 2018
(Zawgyiဖြင့် ဖတ်ရန်) အမေရိကန် အားကစားပွဲတချို့မှာ အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကို ဘုတ်ထောင်ထားတဲ့ Screen ကြီးမှာ ပေါ်တာ မြင်တဲ့အခါ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နမ်းတတ်ကြပါတယ်။ စုံတွဲတိုင်းတော့ မဟုတ်ကြဘဲ တချို့စုံတွဲတွေမှာတော့ အဲဒီလိုလုပ်လေ့မရှိပေမဲ့ အခုဖော်ပြပေးချင်တာကတော့ စုံတွဲတစ်တွဲဟာ သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကို ဘုတ်ထောင်ထားတဲ့ Screen ကြီးပေါ်မှာ မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာ အမျိုးသမီးက နမ်းဖို့ အချက်ပြတာကို အမျိုးသားက မနမ်းဘဲ သောက်နေတဲ့ ဘီယာကိုသာ အာရုံရောက်နေတာကြောင့် အမျိုးသမီက ဂလဲ့စားချေတဲ့အနေနဲ့ ပညာပြလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာ မြင်တွေ့ရတာကလည်း တခြားစုံတွဲတွေ အားလုံးက တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နမ်းခဲ့ကြပြီး ဘီယာသောက်နေတဲ့ အမျိုးသားကသာ နမ်းဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့တာကို မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယို ကိုတော့ Atlanta Hawks က YouTube ပေါ် …